IROSARI YABANGASEKILEYO: IIMFIHLELO, IZITHEMBISO NEZININZI NGOKUNYE
Yazi ngeli nqaku, iinkcukacha malunga irosari yomfi, isithethe esenziwa ekuvukeni nakwimivuzo, ukucela izalamane ezingasekhoyo kwaye banikwe ukuphumla okungunaphakade kunye nokukhanya okungapheliyo. Ungaphoswa lulwazi esiza kukubonisa lona apha.
1 IRosari yabafileyo
2 Iimfihlakalo zabafileyo
2.1 Iimfihlelo ezivuyayo
2.2 Iimfihlelo zokukhanya
2.3 Iimfihlakalo ezibuhlungu
2.4 Iimfihlelo zobuqaqawuli
3 Ezinye zezithembiso zeNtombikazi enguMariya kwabo bathandaza irosari
El irosari yomfi, ekwabizwayo Ingcwele yeRosari Yokusweleka, sisithethe esenziwa emva kokuvuka nokungcwatywa kothandekayo, kwaye kubaluleke kakhulu kumaKristu, kuba, kwesi sithethe, bacela ukuxolelwa komphefumlo womfi, ukuze akwazi ukuphumla ngoxolo ngonaphakade .
Isithethe, ngokuyintloko, luthotho lwemithandazo, eyenzelwa ukubuza iNtombi enguMariya Oyintsikelelo ngokuthandazela umphefumlo wesihlobo, sikwazi ukuthandaza le rosari nokuba kukuzila okanye kude.
Ngoku i Ingcwele iRosari yabafileyo ungenziwa ngalo naluphi na usuku lweveki, kwaye nganye kwezi ntsuku iyahambelana Imfihlakalo, ezenza iseti ebizwa ngokuba «Iimfihlakalo zomfi«. Ezi mfihlakalo zenziwe ngothotho lwe-4, zona ezibandakanya iimfihlelo ezi-5 kuthotho ngalunye.
Ezi mfihlakalo, zeziphi ezenza i irosari yomfi, nganye yenziwe ngokomhla wokwenziwa komthandazo. Oko kukuthi, usuku ngalunye lweveki luhambelana nemfihlakalo ethile.
Ezi mfihlakalo zibalisa ukuzalwa koNyana kaThixo; ukuzalwa kunye nobuntwana boMntwana uYesu. Ezi mfihlakalo ziyathandazwa ngoMvulo nangoMgqibelo weveki nganye.
Umzimba womntu: uxela isibhengezo sentombi eganelwe eGalili, kwisixeko saseNazarete. UThixo wathumela ingelosi uGabriyeli kweso sixeko ukuba ikhangele intombi eyintombi, egama linguMariya.
Utyelelo: ibalisa ngotyelelo lukaMariya kuElizabhete, owathi akuva ukubulisa kukaMariya, umntwana esibelekweni sakhe waxhuma luvuyo; U-Elisabethe, ezele nguMoya oyiNgcwele, uxelela uMariya "Usikelelwe wena phakathi kwabafazi bonke; sinentsikelelo nesiqhamo sesizalo sakho."
Ukuzalwa koNyana kaThixoImfihlakalo yesithathu yovuyo isixelela ngendlela uNyana kaThixo azalwe ngayo emkhumbini, kanye xa uMaria José, umyeni wakhe, wayeye kubhalisa eBhetelehem. UMariya wazala uNyana kaThixo esitalini, owazalelwa kusapho oluhlwempuzekileyo.
Ukunikezelwa koNyana kaThixo etempileni: Ixela xa, ngeentsuku ezisi-8 ubudala, uMntwana uYesu waluswa kwaye waziswa etempileni njengoko umthetho weNkosi usitsho, eYerusalem.
UYesu ulahlekile wafunyanwa etempileni: le mfihlakalo isixelela indlela ukuthula kweVangeli okwaphulwe ngayo malunga neminyaka yokulahleka koMntwana uYesu, de wafunyanwa etempileni.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: INovena eya kwiVirgen del Carmen yonke imihla.
Iimfihlakalo zokukhanya kwi Ingcwele iRosari yabafileyo Babalisa ngobomi basesidlangalaleni bukaYesu waseNazarete, ukusukela ekubhaptizweni kukaYesu kuye kubusuku bangaphambi koMnqweno wakhe. Ezi mfihlakalo zihambelana nooLwezine weveki nganye.
Ubhaptizo lukaYesu: Imfihlelo isixelela ngobhaptizo lukaYesu, kwaye emva koko, uYesu wabona ukuba uMoya kaThixo wehla ukwimo yehobe.
Umtshato eKana: Eli bali lithetha ngomqondiso wokuqala ongummangaliso kaYesu, owathi, emtshatweni eKana, ngesicelo sikanina uMariya, wajika amanzi omtshato aba yiwayini.
Isibhengezo soBukumkani bukaThixo: uthetha ngokubhengezwa koBukumkani bukaThixo, imema onke amadoda nabafazi ukuba baguquke kwaye bakholelwe kwiVangeli.
Ukwenziwa kumila kumbiImfihlakalo isixelela ngokwenziwa kumila kumbi kukaYesu phambi koPetros, uYakobi noYohane, ebabonisa ubabalo lobuthixo.
Iziko le-Ekaristi: ubalisa ngexesha lesidlo sangokuhlwa sokugqibela indlela uYesu awamisela ngayo uMthendeleko, apho wathabatha isonka newayini wathi “Yitya oku; ngumzimba wam lo. Sela eli, ligazi lam eli ».
Iimfihlakalo ezibuhlungu ze Ingcwele iRosari yabafileyo Zibandakanya inkanuko kaYesu, ukusuka eGetsemane ukuya kumabali eSingcwaba eNgcwele. Iimfihlakalo zentlungu zicamngca ngolwesiBini nangoLwezihlanu.
Umthandazo egadiniImfihlakalo ibalwa xa, kunye nabafundi bakhe, uYesu wathandaza esentlungwini "Bawo, ukuba kunokwenzeka, mayidlule le ndebe kum, kodwa ingabi njengoko ndifuna, kodwa njengoko ufuna."
UkuqhayisaImfihlelo ibalisa ngokubandezeleka kukaYesu, xa uPilato wayalela ukuba amtyakatye.
Isithsaba ngameva: usibalisela ngendlela amajoni kaPilato amkhulula ngayo uYesu, emthi wambu ngengubo emfusa, ethwesa isithsaba sameva, emhlekisa.
UYesu nomnqamlezo usendleleni eya eKalvari: ibalisa xa uYesu kwakufuneka awuthwale umnqamlezo emagxeni akhe, esiya kwindawo ebizwa ngokuba yi "Golgotha".
Ukubethelelwa emnqamlezweni: ubalisa umzuzu wokubethela, ekhwaza ngomphefumlo wakhe wokugqibela "Bawo, ezandleni zakho ndibeka umoya wam!".
Iimfihlelo zobuqaqawuli zika irosari yomfi ziyahambelana namabali angovuko lukaYesu Krestu. Ezi mfihlakalo zicamngca ngoLwesithathu nangeeCawa.
Uvuko lukaYesu KrestuKulibali ke likaMateyu 28, 26, apho umpostile axelela ukuba uYesu Krestu wabuyela ebomini emva kwedini lakhe emnqamlezweni.
Ukunyuka kukaYesuEmva kokuvuka kwakhe, uYesu, owayengavuswanga ekwimo yomntu, wenza njalo ukuze kucace ukuba amadoda nabafazi kufuneka bajonge ubomi babo ekuzalisekisweni kweLizwi nemiyalelo yalo, ukuze bangene ebukumkanini bamazulu.
Ukufika koMoya oyiNgcweleEmva kokunyuka kukaKristu, abapostile noMariya bazinikezela kwiPentekoste xa uMoya oyiNgcwele wabonakaliswa phezu kwabo: ubukho basezulwini babugquma abapostile noMariya ngamadangatye abanika uvuyo.
Ukunyuka kukaMariya: kwimfihlakalo yesine ukunyuka kukaMariya kubukumkani bamazulu kuyanxulunyaniswa, emva kokuba iingelosi zithunyelwe nguThixo uYise kuye, noMariya enyukela ebukumkanini bamazulu ngomkhondo wokukhanya ovela kuvulo izulu.
Ukubekwa etroneni kukaMariya: Kwincwadi yesiTyhilelo inxulumene nokuba yayiyintando kaThixo ukuba uMariya anyukele ebukumkanini bamazulu, apho wangcwaliswa khona ngesithsaba seenkwenkwezi ezili-12 kwaye wanikwa indawo ecaleni kukaKristu.
Ezinye zezithembiso zeNtombikazi enguMariya kwabo bathandaza irosari
Thandaza irosari khusela esihogweni; ukutshabalalisa ububi kunye nokunciphisa izono.
Nabani na ohlala ethandaza irosari uya kufumana ubabalo abalucelileyo.
Akukho mphefumlo uya kutshabalala ophathiswe i-rosari.
Ebomini nasekufeni, bonke abo bathandaza irosari yam baya kuba nokukhanya kunye nokuzala kobabalo lwam.
Ndiza kuya kunceda iimfuno zabo basasaza i-rosari yam.
Bonke abo bathandaza irosari yam ngabantwana bam abathandekayo, kwaye nabo ngabantakwabo Yesu unyana wam.
Ezi zezinye zezithembiso zikaMariya oyiNtombi, Unina kaThixo, kubo bonke abo bahlala beza kuye bathandaze iRosari yakhe. Ukuba ufuna ukwazi indlela yokuthandaza irosari yomfi, sazi ukuba ziyintoni na iimfihlakalo, sikumema ngokufudumeleyo ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo: